दुखाई कम गर्ने औषधिबारे जान्नैपर्ने कुरा
असार १८, २०७४ आइतवार १५:१२:०० प्रकाशित
दुखाई कम गर्न प्रयोग गरिने औषधिलाई पेन किलर भनिन्छ । यसलाई ‘नन स्टेरोइडल एन्टिइन्फ्लामेटोरी ड्रग’ भनिन्छ । यस्ता औषधिको प्रयोग आजकाल प्रशस्त प्रयोग गरिएको पाइन्छ । हुनत यसले दुखाईलाई कम गर्छ, तर विभिन्न प्रकारका स्वास्थ्य समस्या (साइड इफेक्ट) पनि उत्पन्न गर्छ ।
कस्ताले पेन किलर प्रयोग गर्नुहुन्न ?
मिर्गौला, कलेजो, मुटु, उच्च रक्तचाप र पेटका रोगीहरुले नदुख्ने औषधि सकेसम्म प्रयोग गर्नुहुन्न । यस्ता औषधिको प्रयोग चिकित्सकको सल्लाहअनुसार मात्रै हुनुपर्छ । लामो समयसम्म नदुख्ने औषधिको प्रयोग गर्नेहरुले आफ्नो मिर्गौला, कलेजो, मुटु आदिको जाँच गरेर औषधिको असर भए नभएको पत्ता लगाउनुपर्छ ।
साँच्चिकै भन्नुपर्दा एउटै पेन किलरको प्रयोग पनि हानिकारक हुन सक्छ । नदुख्ने औषधिमध्ये पारासिटामोल सबैभन्दा बढी सुरक्षित मानिन्छ । तर पनि यो औषधि पनि कलेजोका रोगीका लागि हानिकारक हुन सक्छ । मुटु रोगीहरु र विशेष गरेर एन्जिओप्लाष्टी गरेका बिरामीले एउटा पनि नदुख्ने औषधि खानुहुन्न। खानुपरेमा मुटुरोग विशेषज्ञसंग परामर्श लिनुपर्छ । मिर्गौला रोगीहरुले पनि नदुख्ने औषधिको प्रयोग गर्नुहुन्न । यस्तो औषधि खानुपरेमा मिर्गौला रोग विशेषज्ञसंग परामर्श लिनुपर्छ ।
कुन–कुन पेनकिलर कुन समस्यामा प्रयोग गरिन्छ ?
पारासिटामोल– टाउको दुख्न कम गर्न र ज्वरोमा प्रयोग गरिन्छ ।
आइबुप्रोफेन– दुखाई कम गर्न
आइबु + पारा– दुखाई कम गर्न
डिक्लोफिनैक– दुखाई कम गर्न
एसिक्लोफिनैक– दुखाई कम गर्न
इन्डोमेथासिन– दुखाई कम गर्न
पाइरोक्सिकैम– दुखाई कम गर्न
निमेसुलाइड– दुखाई कम गर्न